I-Glenmaggie Lakehouse - I-Airbnb
Ixesha lokuphumla? Wela ibhulorho yaseGlenmaggie, thatha umoya onzulu kwaye uphumle kwindlela yokuphila yelizwe. I-Glenmaggie Lakehouse yindlu yokulala emi-3 esetwe kumfanekiso welizwe elingqonge iGlenmaggie. Vuka uvuse iintaka ezintyilozayo, umoya ococekileyo ococekileyo kunye nemibono emangalisayo yeChibi.
Abantwana baya konwatyiswa ngezinto zokudlala, iincwadi kunye nemidlalo abanokuyidlala. Ngaphandle banendawo yokubaleka, badlale emhadini wesanti, bajinge kwiseti yokujingi, badubule iihupu okanye bamise umdlalo weqakamba esemva kwendlu.
Zulazula uye eLake ngemizuzu emi-3, qubha, kayak, ski okanye intlanzi de intliziyo yakho yaneliseke. Okanye phumla nje kwidesika ngesiselo esibandayo kunye nekhaya eliphekwe i-BBQ ehlotyeni, okanye ngomlilo wangaphandle ngeglasi yewayini kunye nerosti ephekwe kwi-webber eBusika.
Ipropathi ebiyelwe ngokupheleleyo ithetha ukuba amalungu osapho ohlobo olunemilenze emine amkelekile ngaphandle nawo.
Iifeni ze-Ceiling zifakwe kwigumbi ngalinye lokulala, kubandakanywa neyunithi ye-air conditioner yenkqubo yokwahlula, izifudumezi zombane kwigumbi ngalinye lokulala kunye nomlilo weenkuni kwigumbi lokuhlala.
Igumbi lokuhlambela elineshawa phezu kwebhafu kunye nendlu yangasese eyahlukileyo.
Umatshini wokuhlamba kunye nesomisi ziyafumaneka ukuba uzisebenzisele umntu.
Iilinen kunye neetawuli zokuhlambela zikhona.
Ipropathi ilungele iintsapho kunye nokuphumla ngeempelaveki kunye nabahlobo.
4.74 · Izimvo eziyi-48
Ukuhamba ngemizuzu emi-3 kuphela ukuya eLake Glenmaggie, ukukhawuleza kwemizuzu eli-10 ukuya kwimpucuko ukuze ufumane ikofu kunye nezibonelelo.
Nceda ube nolwazelelelo kwaye uhloniphe uluntu lwasekuhlaleni kwaye uqinisekise ukuba ingxolo igcinwa incinci.
Uya kuba nayo yonke impahla oza kuyonwabela ngexesha lokuhlala kwakho! Ababuki zindwendwe bafumaneka ngefowuni okanye nge-imeyile ngexesha lokuhlala kwakho
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Glenmaggie